I-Cellnex phakathi kwezintandokazi zamabhange otshalo mali | Ezezimali Zomnotho
Enye yezinto ezimangazayo ezinhle kulo nyaka maqondana nezokuphepha ezakha inkomba yezimali zaseSpain ngokungangabazeki yiTelecom Cellnex. Akukhona nje kuphela ukuthi babonisa ukuphakama okungenaphutha. Uma kungenjalo, ngakolunye uhlangothi, kunjalo elinye lamathuba wokuhlaziya abaluleke kakhulu ngamabhange okutshalwa kwezimali. Ngokwezinga lokuthi kungenye yezokuphepha ezikhethiwe ukwenza iphothifoliyo yemodeli yokutshala imali eminyakeni embalwa ezayo.
Ngaphezu kwalokho, akukwazi ukukhohlwa ukuthi kungenye yezindawo zokubheja zezitoko ezijabule kakhulu kulo nyaka, ngokukhula kwamadijithi amabili ngonyaka okungekho lula kubatshalizimali abancane nabaphakathi. Yize kunjalo kulabo abavule izikhundla kulokhu kuphepha okuhlala isikhashana ezimakethe zezimali. Kepha lokho ngokungangabazeki sekuvuliwe igebe phakathi kokuncamelayo kwengxenye enkulu yabenzeli bezezimali. Ukuba yinani elingenza kangcono emakethe yamasheya kunezinye.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ngokulindela okuhle kakhulu emigqeni yabo yebhizinisi futhi ngalokho-ke kungamukeleka kakhudlwana ukukufaka kwi-radar kuyo yonke imigomo yesimo saphakade: esifushane, esiphakathi nesikhathi eside. Akumangalisi ukuthi kudala ubungozi obuncane ezikhundleni ezithathwe kusukela manje ngenxa yesici esihle kakhulu sobuchwepheshe esikulethayo ngalesi sikhathi sonyaka. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe futhi mhlawumbe futhi kusukela ekubukeni kwezisekelo zayo. Kunoma ikuphi, kuyigugu okufanele likhunjulwe kusukela manje.
1 I-Cellnex ekhethwe nguGoldman Sachs
2 Ime kahle emkhakheni
3 Ngokusatshalaliswa kwezabelo ezilinganiselwe
4 Thenga izincomo
5 Ukukhishwa kwesibopho esiguqukayo
I-Cellnex ekhethwe nguGoldman Sachs
Inani lemakethe yamasheya lithola izindaba ezinhle kakhulu ezivela emabhange okutshalwa kwezimali aphesheya. Futhi ngalomqondo, kugcizelela lokho GoI-ldman sachs ukhethe amasheya amane aseSpain ohlwini lwawo lwamasheya ayizintandokazi aseYurophu ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Lezi izi IBanco Santander, iFerrovial, i-Aedas Homes kanye ngqo neCellnex. Zonke zifakiwe kuhlu olukhethiwe 'lwamacala okulahlwa yicala' ebhange lotshalo-mali lase-US. Lezi yizindaba ezikhuthaze inkampani efakwe ohlwini ukuthi iqhubeke nokukhuphuka kwayo futhi ngendlela ekholisayo kubatshalizimali.
Ibhange lotshalomali lomhlaba jikelele, iGoldman Sachs, inika amandla aphezulu we-50%. Ngamanye amagama, intengo ecishe iphindwe kabili amanani ayo wamanje ezimakethe zezimali. Okusho okuhle nokuhle ngalesi siphakamiso sokwenza ukonga okunenzuzo kusuka manje kuqhubeke. Kuze kube seqophelweni lokuthi iCellnex ithathwa njengenye yezintandokazi zikaGoldman ezimakethe zaseSpain. Nganoma yiluphi uhlobo lwephrofayili yabatshalizimali, kusukela kokunolaka kakhulu kuya kokulingene noma okulondolozayo. Ngoba ukusebenza kwayo ezimakethe zezimali kusukela manje kuqhubeke kungaba ngcono kakhulu kunakwamanye amaphepha.
Ime kahle emkhakheni
ICellnex Telecom inkampani yaseSpain yezinsizakalo kanye nengqalasizinda ye ezokuxhumana ezingenantambo enezindawo ezingaphezu kwezingu-27.000 kulo lonke elaseYurophu. Iphinde ithuthukise izixazululo emkhakheni wamaphrojekthi "wamadolobha ahlakaniphile", enza ngcono izinsizakalo zesakhamuzi, ngamanethiwekhi kanye nezinsizakalo ezenza ukuphathwa kukamasipala. Kule ndawo, iCellnex Telecom isebenzisa inethiwekhi yokuxhumana ehlakaniphile evumela ukuxhumana phakathi kwezinto, ngakho-ke, ukwakhiwa kohlelo oluqinile lwe-Intanethi Yezinto.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, inkampani ibhalwe emakethe eqhubekayo yemakethe yamasheya yaseSpain futhi iyingxenye yokukhetha Ibex 35 ne-EuroStoxx 600 kanye nenkomba yeMSCI Europe. Futhi kuyingxenye yezinkomba zokusimama i-FTSE4GOOD, i-CDP (i-Carbon Disclosure Project), i-Sustainalytics kanye ne- “Standard Ethics”. Abanini bamasheya ebhentshini likaCellnex bahlanganisa iConnecT - abaninimasheya abo okungu-Edizione (60%), u-Adia (20%) noGIC (20%) - abanamasheya angama-29,9% kwi-share capital, kanye naseThreadneedle Asset Management, eCriteriaCaixa naseBlackrock, nabambalwa izigxobo.
Ngokusatshalaliswa kwezabelo ezilinganiselwe
Yize impilo yayo emfushane ezimakethe zezimali, isivele ingenye yezokuphepha ezisabalalisa izinzuzo phakathi kwabaninizabelo. Yize inzuzo yayo ingeyona yokuncintisana kakhulu kunkomba ekhethiwe yemakethe yamasheya kazwelonke. Ngenzalo engaguquki futhi eqinisekisiwe njalo ngonyaka cishe ngama-3%. Ngaphansi kwesilinganiso se-Ibex 35, yize kubonakala ukuthi singayinyusa eminyakeni ezayo, okungenani ukuyiletha emikhawulweni ziphakathi kuka-4% no-5%. Kunoma ikuphi, kungenye yezindlela zokwakha iphothifoliyo yemali engenayo engaguquki ngaphakathi kokuguqukayo. Noma yini eyenzekayo ezimakethe zezezimali futhi lokho kuthanda abatshalizimali abancane nabaphakathi ngenxa yokuzinza okunikezayo ekuvumelaneni kwamanani abo.
Ngakolunye uhlangothi, ingakhiwa kufayela le- inani lokukhosela ukuthatha izikhundla ngezikhathi zokungazinzi okukhulu ezimakethe zezimali. Njengoba kwenzekile ezinyangeni ezedlule lapho ukufakwa kwengcindezi yabo yokuthenga kucaciseleke kakhulu kumthengisi. Ngokwanda okuphawulekayo kwevolumu yokuhweba kuzo zonke izikhathi zokuhweba. Lokhu kukhombisa intshisekelo ekhulayo engxenyeni yabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ukufika ezingeni lokuthi lokhu kungenye yezintandokazi zakhe ezifanele kakhulu kulo nyaka okhona.
Ngaphandle kokunyuka ezinyangeni ezisanda kwedlula, izincomo ezivela kubenzeli bezezimali nakubathengisi zicace bha: thenga ngaphezu kwakho konke okunye. Awukafiki inani lentengo yakho futhi kuningi ongakusho ekusetheni izintengo zakho. Yize kujwayelekile ukuthi ukulungiswa kokujula okuthile kwenzeke ekulinganisweni kwako kwe kuhambisane nomthetho wokunikezwa nokufunwa kwabatshalizimali. Njengamanje kungaba yithuba lebhizinisi uma isifiso sakho ukwenza ukonga kube nenzuzo, okungenani esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside. Ngokuqonda okunengqondo kulesi sigaba sokusebenza ezimakethe zezimali.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, asikwazi ukukhohlwa ukuthi iCellnex ingenye ye- Izitoko ezivelayo ku-Ibex 35. Kuze kube yilapho isimangaze ingxenye enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi, lapho abanye bebengazi nokuba khona kwayo ngoba kube ngesinye sezilinganiso zokugcina zamasheya ukufika kulo mkhakha. Ngakolunye uhlangothi, ukuqapha kwayo kuya ngokuya kufaneleka kubahlaziyi bezezimali futhi le nto isiza ukuyenza yaziwe kangcono phakathi kwama-ejenti ezimakethe zezimali. Emkhakheni, njengokuxhumana ngocingo, lapho kukhona iTelefonica kuphela.
Kunoma ikuphi, kufanele kube yisiphakamiso sokubhekisisa ezinyangeni ezizayo ngenhloso yokwenza ngcono ibhalansi ye-akhawunti yethu yokonga. Ngengcuphe encane kunezinye izibambiso, okungenani okwamanje. Iqiniso elinikeza ukuzethemba okwanele ukuvula izikhundla kusuka manje kuqhubeke, okuyikho ekugcineni okumayelana nakho.
Ukukhishwa kwesibopho esiguqukayo
ICellnex Telecom ibeke imibandela yokukhishwa okusha kwamabhondi aphezulu aguqulwa futhi angavikelekile enkampani. Ukubekwa kufinyelele kuma-euro ayizigidi ezingama-850. Amasheya angaphansi kwezibopho ilingana no-5,0% wemali yenkampani. Intengo yokuqala yokuguqulwa kwamabhondi, ekhonjelwe ekulungisweni okujwayelekile, isethwe kuma-euro ayi-57,1756, okulingana ne-premium ka-70% ngaphezu kwentengo emaphakathi enesisindo sevolumu yentengo yamasheya phakathi kokuvulwa nemakethe evaliwe namuhla. Njengomphumela wentengo yokuhlenga okuvunyelwene ngayo (108,57%), inani lokuguqulwa elisebenzayo lizoba ngama-euro angu-62,1.
Le nkinga ingezwe kufayela le- ukukhishwa kokuqala kwamabhondi aguqukayo eyenziwa yinkampani, kusukela i-IPO yayo ngo-2015, ingqikithi yama-euro ayizigidi ezingama-800, futhi eyabonakala ngeziqeshana ezimbili: ukubekwa kokuqala kwenani lama-euro ayizigidi ezingama-600 ngoJanuwari 2018; kulandelwe ukubekwa okungeziwe kwezigidi ezingama-200 ngoJanuwari 2019 (okungafinyeleleka nalokho kukaJanuwari 2018). Emkhakheni, njengokuxhumana ngocingo, lapho kukhona iTelefonica kuphela.
Ngokuhambisana nokubekwa kwalolu Daba olusha, UJosé Manuel Aisa, uCellnex CFO kanye noMqondisi we-M & A., igqamise "ukwamukelwa okuhle kakhulu kwemakethe kulolu daba olusha lwamabhondi aguqukayo. Iqiniso elenza ekuphenduleni okuhle kakhulu kwabaninimasheya kanye nemakethe ekukhuleni kwemali yakamuva nje kwama-euro ayizigidi eziyi-1.200 okwenziwe ngoMashi odlule. Ngaleyo ndlela sisebenzisa izimo ezivumayo ezihlinzekwa yimakethe ukuqinisa ukwakheka kwebhalansi yethu, ukwenziwa kwenkampani kanye nemibandela yezikweletu zethu ngokwezindleko nangempilo emaphakathi, uma kubhekwa iphothifoliyo ebalulekile yamaphrojekthi akhonjwe (ipayipi) yemisebenzi yokuthenga yeCellnex ”.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » I-Cellnex phakathi kwezintandokazi zamabhange otshalo-mali